दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूह- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २९, २०७६ कृष्णप्रसाद पौडेल
मानिसले आफ्नो श्रमलाई यन्त्रको जिम्मा लगाएसँगै त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने खनिज ऊर्जा उत्खनन, ठूला प्रशोधन कारखाना र तिनलाई चाहिने कच्चा पदार्थको खोजी तीव्र भयो । मुख्यतः यही बेलायत र पश्चिमी युरोपको औद्योगिक विकासका लागि औपनिवेशिक यात्रा थियो । यो यात्रा त्यस्ता उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको जोहो गर्न थालिएको थियो ।
सन् १९४९मा युद्धमा हारेको युरोपको पुनर्निर्माण गर्ने अमेरिकी घोषणासँगै 'विकास' शब्दको प्रादुर्भाव भयो । यसले देशीय गठबन्धन, हतियार र थुनछेकका भरमा गरिने भौगोलिक उपनिवेशभन्दा फरक भौतिक उत्पादन, बजार र पैसाका बलमा प्रकृति र मानिस दुवैको नियन्त्रण गर्न सिकायो । सँगै यसले हुने र नहुनेको बीच सानो र ठूलाको मनोवैज्ञानिक पर्खाल खडा गर्‍यो । यस्तो मनोविज्ञानले हीनताबोध, परनिर्भरता र मगन्ते संस्कृति थोपर्दै कित विकासे हुनैपर्ने नत्र पछि परिने सामाजिक मान्यता स्थापित गर्‍यो ।
आधुनिक विकासले बाँडेको भौतिक सुविधाको यो सपनामा बाँच्न पाउन यस पृथ्वीमा रहेका सबै मानिसलाई सम्भवै छैन । उदाहरणका लागि, संसारभर १ अर्ब कार छन् र सबैलाई एउटा-एउटा चाहिने हो भने ७ अर्ब कार चाहिन्छ । यी चलाउन चाहिने ऊर्जा र बाटोको कुरा पनि छँदै छ । अहिले १००० अमेरिकीमध्ये ९१० जना कार चढ्छन् । यो दर चीनमा १,००० मा १५४ र भारतमा ५० छ ।
दुर्भाग्यवश, केही सीमित शासक मात्र सुविधासम्पन्न हुन सक्ने यस्तो आधुनिक विकास हाम्रो समृद्धिको सपना बन्यो । यही सपना बाँड्दै अहिले आफू र आफ्नाका लागि मात्र भौतिक सेवा, सुविधा र सम्पन्नता बढाउन संसारभरि लुटपाट चलिरहेको छ । यसमा नेपाल पनि अपवाद छैन । यस्तो लुटपाट गर्न अहिले नेपालमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रका हिमायती (आर्थिक दलाल) र समाजवादी टोपी लगाएका राजनीतिका दलाल एकै ठाउँ छन् । एनसेल करछलीदेखि बालुवाटारको सरकारी जमिनको लुटपाटसम्ममा यो छर्लंगै देखिन्छ ।
यसका केही साना वितण्डा त देखिँदै आएका छन् तर ठूला उथल-पुथल भने निकट भविष्यको संघारमा छन् । देखिने भौतिक विकासको पत्रभित्र नदेखिने विनाशलीलाको जग अग्राखझैं बलियो बन्दै गएको छ । मानिसले तथाकथित सुखी जीवनका लागि भौतिक सुविधाको सपनासँगै खनिज ऊर्जा रित्याउँदै छ, वनजंगल र पानीका स्रोतलाई विषाक्त बनाउँदै छ । माटामा कृत्रिम रसायन र रासायनिक विषादी, नसड्ने प्लास्टिक मिसाएर आफैंलाई मास्नेे विषको भण्डार निर्माण गरिरहेछ । यसबाट चेत्ने सुरसार अझै ल्याएको छैन । यसरी निरन्तर बिग्रँदो माटो र मानव स्वास्थ्य सम्हाल्न नै सकिँदैन कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यी सबै विध्वंसका पछाडि दलाल पुँजीवादको ठूलो हात छ । यसको उत्कृष्ट नमुना हो- अहिलेको सहर, सहरिया प्रवृत्ति र तिनले गर्ने प्रकृतिप्रतिको व्यवहार । काठमाडौं खाल्डो होओस् वा अन्यत्र आफैँले खानपर्ने अन्न, तरकारी, फलफूल फलाउन छोडेर समृद्धिका नाममा कंक्रिटको सहर फलाइएको छ र यो निरन्तर जारी छ । हामी विकासे हुने होडमा दलाल पुँजीवादको दुश्चक्रमा फसेर मृत सहरका बासिन्दा हुँदै छौँ तर हामीलाई यसको अझै राम्रो हेक्का भने भइसकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरू विचारशून्य छन्, यिनका कार्यकर्ता पाटीमा सुस्ताएका छन् । आम मानिसलाई आफ्नै दैनिकी सम्हाल्न भ्याइनभ्याइ छ । यो अहिलेको कटु यथार्थ हो । यसरी हेर्दा तथाकथित आधुनिक विकासको विनाशलीलाबाट हाम्रो जीवन जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो भएको छ । अर्को अर्थमा दलाल पुँजीवादले थुपारेकोे फोहोरको डंगुर हटाउँदै यसले निम्त्याएका समस्यालाई उजागर गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।
विडम्बना, मानवीय चेतना कुम्भकर्णझैं सुतेको हुन्छ । सन् नब्बेको दशकमै बलियोसँग उठेको प्रकृतिलाई न्याय नगरी सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन भन्ने सामाजिक न्याय र प्रकृतिको दिगोपनाको बहस बिस्तारै सुस्ताउँदै अहिले आर्थिक विकास अर्थात् समृद्धिको ओझेलमा परेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका सामाजिक न्याय र दिगो प्रकृतिका प्रस्तावहरू कागजका पानामा सीमित भएका छन् । सामाजिक न्यायका मूल आधार लोकतन्त्र, समावेशिता र निष्पक्षताजस्ता मूल मर्म र मानिस, समाज र प्रकृतिबीचको अन्तरनिर्भरताको सम्बन्ध खिइँदै गएको छ ।
त्यसो त दलाल पुँजीवादले निम्त्याएका विध्वंसविरुद्धका आक्रोश भुसको आगोझैं सल्किरहेका छन् । नयाँ र सिर्जनशील उपायका हजारौं छाल पनि संसारभरि नै उठिरहेका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै एकताबद्ध भएर आलोचनात्मक चेतना बढाउन फेरि नयाँ बहस चाहिएको छ । दलाल पुँजीवादले भुत्ते बनाएको मानवीय सामाजिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्जीवन दिनका लागि हाम्रो समग्र चेतनालाई उन्नत बनाउनु अपरिहार्य भएको छ ।
हामी आधुनिक विकासको विकल्पका संघारमा उभिएका छौं । मानवलगायत अन्य जीवनका आधार अरू थप बिग्रन नदिई भावी पुस्तालाई सुम्पनु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो । यसका लागि सबैले दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहबाट निस्कन सचेत प्रयत्न गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो दलाल अर्थतन्त्रले मौलाएको कुशासन र भ्रष्टाचारका जरा काट्दै नेपाली समाजलाई सुशासित बनाउन र यी भ्रष्टाचारीलाई यसको कलंकबाट समेत मुक्ति दिलाउन आवश्यक छ ।
ब्राजिलका मार्क्सवादी शिक्षाविद् पाउलो फेरेले भनेझैं, यो दोहोरो मुक्तिको सामाजिक दायित्व निर्वाह गरी सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिने यस अभियानका लागि यो स्वर्ण अवसर पनि हो । यो दर्दनाक स्थिति हामीले अब पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न हुँदैन । 'यो भएन र अब यसरी हुँदैन' भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
हामीलाई फेरि एक पटक सामाजिक जागरणसम्बन्धी सशक्त आन्दोलन चाहिएको छ, ताकि दलाल पुँजीवादले थोपरेको दलाल संस्कृतिलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न सकियोस् तर यसो गर्न नसक्ने र अब हुने आन्दोलनले पनि फेरि यिनै दलाल पुँजीवादका नयाँ नाइके तयार गर्ने हो भने हामी आफैंले खनेको 'समृद्धि'का खाल्डामा पर्ने निश्चित छ । प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:०७
बुहारी माने अझै घरधन्दा !
वैशाख २९, २०७६ मञ्जु भट्ट
मेरा भतिजाले नेपाली सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको सुरुवाती तालिम सक्यो । तालिम सकिएपछि अरू प्रशिक्षार्थीका अभिभावकलाई समेत निम्त्याएर भोजभतेर गर्नुपर्ने सेनाको नियम रहेछ । भोज गर्ने भएपछि अछाम घरबाट सासूससुरा, जेठाजुजेठानी र अरू भतिजाभतिजी, फुपू काठमाडौंमा हामी भए ठाउँ आइपुगे ।
हामी घरका मात्रै पन्ध्र जना भयौं । घरमा अर्को दिन ठूलै भोज भयो । सबै मिली पकाइतुल्याई गरियो । सबले रमाइरमाई मासुभात खाए, नाचगान गरे ।
करिब दस वर्षअगाडिको प्रसंग हो यो । भर्खरै बिहे भएर आएकी मलाई माइतीको न्यास्रोले छोडेको थिएन । अछामको चलनअनुसार जुठा भाँडा घरका छोरीले छुन नहुने रहेछ । बुहारी भए सासूले, देवरानी भए जेठानीले पनि माझ्न नहुने रहेछ । म सानैदेखि मासु खान्नथेँ । म सानै हुँदा भारतका एक जना गुरुको मृत्यु भएको थियो र उनकै सम्मानमा हाम्रो गाउँका कैयौँ शाकाहारी भएका थिए । तिनमा एक जना म पनि थिएँ ।
मैले मासु खान छोडेको बीस वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । माइतीमा घरभित्र मासु पाक्दैनथ्यो । चुलो बाहिर छुट्टै थियो । मलाई मासुको गन्धै मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले मासुको गन्ध सुँघ्नु नपरोस् भनेर मैले त्यस दिन अर्कै कोठामा बसेर भोज खाएकी थिएँ । खानपिन गरेर भान्सामा जाँदा बेसिनभरि मासुभातका जुठा भाँडा देखेर म छक्क परेँ । आफू कान्छी बुहारी भए पनि मलाई अछामको चलन त्यसअघि थाहा थिएन ।
घरका सबैले मेरै जिम्मा लगाइदिए त्यत्रा जुठा भाँडा ! म मासु खाँदिनँ भन्ने सबैलाई थाहा थियो तर मासुकै जुठा भाँडा माझ्न मैलाई लगाए । आँसु चुहाउँदै मैले भाँडा नमाझी धर पाइनँ । माइतीको खुबै याद आयो । आमाका घरमा भएकी भए यस्तो अन्याय हुन्नथ्यो भन्ने सम्झँदा झन्डै भक्कानो छुट्यो ! ती भाँडाकुँडा मासुभातका नभएका भए मलाई दुःखै लाग्दैनथ्यो । त्यतिखेर लाग्यो- छोरीका दुइटा घर हुन्छन् भन्छन् तर ऊ दुइटै घरमा पराई हुने रहिछ । न घरकी न घाटकी !
यो उदाहरणबाट थाहा हुन्छ- नेपाली समाजमा बुहारीको हैसियत कस्तो हुन्छ । ज्वाइँले ससुरालीमा पाउने र बुहारीले घरमा पाउने व्यवहारमा आकाशपातालको फरक हुन्छ, जुन जायज होइन । बुहारी नयाँ घरमा भित्रिएपछि सबैको इच्छाअनुसार सुत्नु/उठ्नुपर्ने हुन्छ । कसलाई के मन पर्छ या मन पर्दैन भन्ने ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै काममा कैफियत भए, भन्न पछि पर्दैनन्- माइतीमा यत्ति पनि सिकाएनन् ! अर्कातिर, ज्वाइँलाई ससुरालीमा आँखामा राख्ने गरिन्छ । ससुरालीमा त्यत्रो मान पाउने ज्वाइँले उनकै लागि जन्मघर छोडेर आएकी श्रीमतीलाई पनि आफ्ना घरमा त्यस्तै व्यवहार भएको छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हो तर यो कुरो धेरैजसो घरमा खरायोको सिङ बराबर भएको छ । दुःखको कुरा, समयसँगै परिवर्तन हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका मानिस समयकै पदचापलाई बुझ्न भने मन गर्दैनन् ।
हालै गाउँबाट नन्द र उनका श्रीमान् कामविशेषले काठमाडौं आएर हामीसँगै बसेका छन् । बिहान उनीहरू काममा बाहिर जान्छन्, हामी खाना पकाई, खाई उनीहरूका लागि राखिदिएर आआफ्ना काममा हिंडिहाल्छौं । बेलुका कामबाट फर्किंदा पाँचपाँच सन्तानका आमाबुबा उनीहरू गफिएर बसिरहेका हुन्छन्, बिहानदेखिका जुठा भाँडा भने बेसिनमै सुकिरहेका हुन्छन् । नन्दले माइतीमा भाँडा धुनै भएन ! उनका श्रीमान् हाम्रा ज्वाइँ भइहाले ! उनले झन् के सिन्को भाँच्थे ! भाँडाकुँडा धोएर फेरि पकाएर खुवाउन परिहाल्यो ।
यस्तो नचाहिने नियम अझै अस्तित्वमा हुनु हामीले समयलाई नबुझ्नु हो । कहिलेकाहीँ शरीरलाई गाह्रोसाह्रो पर्दा पनि महिलाले ऐय्या भन्न नपाउनु ? परिवारमा सधैँभरि एकै जनाले घरधन्दा गरिरहनुपर्दा अपहेलित महसुस हुँदोरहेछ । मेरी सासूले पाँच छोरी र चार छोरा हुर्काइन् । बुहारी घरमा नआउन्जेल घरका अरू सदस्यले चिया खाएको गिलास पनि उनैले धुनुपर्थ्याे रे ! नौनौ जना सन्तान भए पनि सासू नै जोतिनुपर्ने । छोरीले माइतीमा जुठा भाँडा छुन नहुने, छोराले छोए जातै जाने ! श्रीमान् त 'शिर माथिका' भइहाले !
अचेल नेपाली दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । त्यहाँ उनीहरू पक्कै हात बाँधेर बस्न पाउँदैनन् । कतिपयले शौचालय सफा गर्ने, रेस्टुराँमा जुठा भाँडा माझ्ने, अरूका लुगा धुनेजस्ता काम पनि गर्ने गरेका छन् । आफ्ना घरमा सिन्को नभाँच्ने उनीहरूले विदेशमा बाध्यतावश अनेक थरीका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । घरतिर काम गरे जातै जाने जस्तो गर्नेहरूलाई विदेशमा सास फेर्ने फुर्सद हुन्न । कति जना त्यसै त्यसै कहालिइरहेका हुन्छन् ।
यसमा हाम्रो परिवारकै, समाजकै गल्ती छ । सानैदेखि यो काम छोराले गर्नु हुँदैन भन्दै केही नसिकाउँदा छोरा-बुहारीमा भेदभाव बढ्दै गएको हो । काम जस्तो भए पनि त्यो पूजा बराबर हुन्छ भन्ने विदेशी मान्यता हाम्रो समाजमा पनि लागू गर्न सके न हाम्रा दाजुभाइले विदेशमा दुःख पाउँथे, न त हामीजस्ता बुहारीहरूले घरभित्रै दिनदिनै अपहेलित भइरहनुपर्थ्याे ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:०५